Wakaaladda Madbacadda Qaranka - Wikipedia
Wakaaladda Madbacadda Qaranka waxaa la aas aasay ka dib markii Af Soomaaliga la qoray sanadkii 1972dii. Xarun casri ah oo soo saarto buugaag iyo xog qoran ayay noqotay Wakaaladda Madbacadda Qaranka. Horumarka iyo mudnaanta Wakaaladda Madbacadda Qaranka waxaa lagu garan karaa inay wasaarado la tartamaysay iyada oo lagu garan karo in koox ka mid ah kooxaha Naadiyaasha Qaranka ee Kubadda Cagta, magaca madbacaddana uu ku xardhanaa calanka Naadiga Madbacadda. []
3 Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta
4 Waayahan Dambe
Wakaaladda Madbacadda Qaranka oo marka la soo gaabiyo loo qoro ama liyaah, "Wakaalada Madbacadda" waxay ku taalay bartamaha magaalada Muqdisho iyada oo dhabarka ku haysay Xafiiska Dowlada Hoose Degmada Xamarwayne.
Waakaalada Madbacadda xilkeeda wuxuu ahaa daabacida ama soo saarka buugaagta iyo dhamaan qoraalada loo diyaariyay hab cilmiyaysan. Wakaaladda waxay daabacday dhamaan buugaagta Af Soomaaliga ku qoran tan iyo kolkii la qoray Far Soomaaliga sanadkii 1972dii. Laga bilaabo mudadii Ol Olaha baahinta Far Soomaaliga sida qaybtii hore ee magaalooyinka laga hirgeliyay iyo ol olihii caanka noqday ee loogu magac daray Ol Olaha Horumarinta Reer Miyiga kaas oo socday mudo shan sano ah.
Shaqaalaha Wakaaladda Madbacadda waxay iskugu jireen farsamo yaqaano ku xeeldheer habka dejinta qoraalka iyo maamul howl wadeeno maareeya xogaha qoran iyaga oo bixinayo dariiqa hagida iyo daabacada wax walba oo la hor keeno xafiiska daabacaada.
Daabacaadaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Tiro ama cadad aad u balaaran ayay daabacday Wakaaladda Madbacadda oo ahayd xarun dowladeed. Wakaalada Madbacadda daabacaadihii ay daabacday waxaa markii hore lagu bilaabay wax walba oo laga aruurin karay maanka bulshada Soomaaliyeed. Xarunta Manaahijta ama Xafiiska Horumarinta Manaahijta ayaa ugu daabacaad badnaa maadaama uu xafiiskan mas'uul ka ahaa waxbarashada aas aasiga ilaa dugsiyada sare.
Dhamaan maadooyinka dugsiyada hoose ilaa sare ayay daabacday wakaalada. Waxaa jira ciwaano ay ka mid yihiin Af Soomaali, Suugaan, Taariikh, Juquraafi, Saynis, Fisigis, Kimistari,Bayoolaji, Xisaab, iyo buugaag bareyaal sare sida Shire Jaamac Axmed Naxwaha Af Soomaaliga, 1976 iyo Maxamed Xaaji Xuseen Raabi Codaynta af Soomaaliga iyo Habka qoraalka oo labadaba la daabacay 1977.
Ciwaano guud ahaan ka badan qiyaastii 400 oo iskugu jira qoraalo gaagaaban sida ciwaano loogu tala galay shaqada iyo shaqaalaha ayay daabacday wakaalada bilowgii hore. Laga bilaabo 1973dii, buugaag baaxad leh oo ku dhow tirada kore ayay daabacday kuwaas oo loo diyaariyay manaahijta wadanka ka jiray sida:
Habka Shaqada iyo Shaqaalaha-Wasaarad walba iyo daabacaad u gaar ah
Waxbarashada Aas Aasiga
Waxbarshada Dugsiyada Dhexe iyo kuwa sare
Tacliinta sare sida Jaamacadda Ummada, Lafoole iyo Machadyada sida beeraha, farsamada, badda iwm.
Dadyow badan oo Afrika ama qaaradaha kale ayaan gaarin dadaalka Soomaali gaartay markii ay afkeeda qoratay taariikhdeeda, suugaanteeda iyo murtida sooyaalka ah ururis ugu dhaqaaqday.
Gumaystaha dhulka dheeftiisa iyo bulshada intaba wuu cayreeyay meel walba oo uu tagay. Maadaama gumaysi laga xoroobay, kaas oo dadaal badan u galay in dhaqankiisa la qaato isla markaana ku talo galay in uu maran habaabiyo taariikhda, nidaamkeenii dhaqandhaaale, siyaasada iyo guud ahaan fahanka bulshada, ayaa iska markiiba laga xoroobay oo fakarkii iyo taariikhda bulshada ayaa xoreebay mar hadii afkii hooyo si walba loo hantay.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Hay'adii ugu dadaalka badnayd dhanka soo saarka buugaag iyo qoraalo kuwaas oo lagu daabacay Wakaaladda Madbacadda waxay ahayd Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta.
Buugaag ayay u diyaarisay wasaaradda dhamaan heerarka kala duwan ee barnaamijyadii ay maamulaysay sida dugsiyada aas aasiga, waxbarashada dadka waaweyn iyada oo 1973dii la bilaabay in Af Soomaali lagu qoro dhamaan daruusta ka baxda ilaa heerka dugsiyada sare.
Aqoonyahano rag iyo dumar iskugu jira ayaa ka qayb qaatay baarista, ururinta, dejinta, curinta, farshaxameynta buugaag tiro balaaran leh oo ilaa maanta laga faa'iidaysto.
Waayahan Dambe[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Wakaalada Madbacadda Qaranka waxay ku jirtaa xarumaha aan wali ka soo kaban burburkii qaran ee 1991 iyada oo ay xambaarsanayd howl baaxad balaaran leh sida wargayska qaran ee maalinlaha ahaa iyo dhamaan daabacaadaha xarumaha waxbarashada. []
[Naadiga Madbacadda Qaranka http://www.kubadda.com/News/Article/tabid/101/ID/4/WARAYSI-MURIIDI-ABANUUR-ABATI.aspx]
[Wakaaladda Madbacadda Qaranka http://allsomaliweyn.com/?p=3340]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wakaaladda_Madbacadda_Qaranka&oldid=150973"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Diseembar 2015, marka ee eheed 09:00.